CUDURKA MAREK EE DIGAAGGA: CALAAMADAHA, DAAWEYNTA, TALLAALKA - BEERAHA DIGAAGA
Digaagga ayaa ah kuwa ugu badan ee deggan guryaha iyo beeraha labadaba, laakiin badi shimbiraha ayaa la kulma cudurro kala duwan, taas oo ah sababta ugu weyn ee khasaaro weyn, gaar ahaan beeraha waaweyn. Mid ka mid ah cudurradan waxaa ka mid ah infekshanka Marek, taas oo dhif ah, laakiin waxay burburin kartaa tiro badan oo digaag ah. Qodobkan waxaan eegeynaa faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan cudurkaan, qaababka iyo hababka looga hortago cudurka.
Cudurka Marekku waa fayras fayras ah oo digaag ah, oo markii ugu horreysay lagu sharraxay cilmi baaraha Hungarian Jozsef Marek 1907. Cilmi-baadhistu waxay ku magacawday polyne-diliinka diliinka, laakiin waqti ka dib ayaa cudurku ku dhacay dunida oo dhan sida cudurka Marek.
Ma taqaanaa? Cudurkii ugu horreeyay ee caabuqa masska iyo dhimashada shimbiraha ka yimaada cudurka Marek ayaa la duubay 1949. Tan iyo 60-kii qarnigii 20aad, dhulka uu daboolay cudurku wuu kordhayay sannad kasta, xilligan xaadirka ah, waxay la dhibaatoonayaan beeraha digaaga iyo beeraha ku yaal Maraykanka, Jarmalka, iyo England.
Waxaa jira noocyo badan oo cudur ah, kuwaas oo lagu garto xaalad aad u muuqata oo ka mid ah jiritaanka shimbirta, sidaas darteed, waxaan u tixgelineynaa si faahfaahsan si ay u awoodaan in ay kala soocaan foom kasta oo qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waqtigooda.
Foomkan oo ah cudurku wuxuu la xiriiraa waxyeelo u gaarsiisan nidaamka shimbiraha. Gobolka digaagga waxaa weheliya horumarinta qayb ka mid ah qaybta ama dhamaystiran ee paralysis, dhaqdhaqaaqa hoos u dhaca, waxyeelo gaarsiinta mashiinka iyo habdhiska dareenka. Xaaladdan oo kale, digaagga ayaa lugaha ku faafi doona jihooyin kala duwan, gobolku wuxuu la xiriiraa la'aanta awoodda uu u leeyahay in uu u guuro sababtoo ah fashilaadda lugaha.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido cudurrada digaagga iyo hababka daweyntooda.
Foomkan cudurkan waxaa weheliya waxyeelo xagga indhaha shimbiraha, kaas oo keeni kara indho la'aan. Xaaladdan oo kale, iridha isha ayaa noqota mid xiiran, qaabka caadiga ah ee ardaygu uu dhibsado, oo si tartiib tartiib ah u dego si loo dhamaystiro burburka.
Foomkan cudurkan waxaa weheliya kororka tufaaxa tufaaxa, dhacdo qanjirada lafdhabarta inta badan ee beerka iyo beeryarada. Cudurka waxaa weheliya xaalad sii xumaaneysa xaaladda guud ee shimbirta, waxay noqoneysaa mid hurdo la'aan ah oo liidata, aan firfircooneyn.
Cudurka Marek wuxuu ku dhacaa saameeynta herpevirus ee kooxda B. B. Herpevirus wuxuu ku sii wadi karaa dhaqdhaqaaqiisa shimbirta, gogosha, ukumaha iyo walxaha guriga muddo dheer, laakiin waa in heerkulka hawadu uu xasilloon yahay oo waa +25 digrii.
Fayruska, saameynaya shimbiraha, waxaa loo gudbin karaa shakhsiyaadka kale ee dhibcaha hawada, iyada oo loo marayo mareenka caloosha iyo mindhicirka. Si dhakhso ah, dadka oo dhan waxaa saameeya fayraska.
Waa muhiim! Badanaa, cudurrada Marekku waxay la kulmaan shakhsiyaadka da'doodu tahay 2 toddobaad, kiiskan 85% ee digaagga ayaa ku dhici doona haddii fayrasku guriga galo.
In coop digaag ah oo shimbiraha ay ku dari karaan kuwa lamid ah, duqsiyada, shilinta, kuwaas oo loo tixgeliyo sidey cuduro firfircoon. Toddobo maalmood ka dib marka infekshinka ka dib, digaagu ma muujiyo calaamadaha cudurka, sidaas awgeed muddo dheer waa fayras firfircoon oo fayruska ah oo dadka kale ku dhibaateeya.
Sida cudur kasta oo kale, Cudurka Marekku wuxuu leeyahay calaamado muuqaal ah oo kala duwan oo ku xiran qaabka koorsada - mid daran ama mid caadi ah.
Waxaan kugula talinaynaa in aad barato astaamaha iyo hababka daaweynta cudurrada sida boronkiitada faafa, caleemaha wax soo saarka beeraha, aspergillosis, mycoplasmosis, conjunctivitis, pasteurellosis, colibacillosis iyo cudurada Newcastle.
Qalabka degdega ah ee cudurku wuxuu la xiriiraa calaamadaha bukaan-socodka fudud oo lagu garto:
dhaqdhaqaaq aan xuduud lahayn;
yaraanta dhiigga iyo unugyada dhiigga cas;
korodh yar oo ah xaddiga dhiigga qaarkood (pseudo-eosinophils, lymphocytes ama monocytes).
Inta badan jimicsiga degdega ah ee cudurka wuxuu keenaa dhimashada degdega ah ee shimbirta.
Inta badan, cudurku wuxuu la socdaa qaabka caadiga ah ee cudurka, waxaa sidoo kale loo yaqaanaa koorsada subacute.
Qaababka kiliinikada ee qaabka caadiga ah waa mid fudud oo la soo bandhigay:
dhibaatooyin badan oo leh nidaamka gaas;
isuduwidda iyo dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa;
dhaqdhaqaaqyo qallafsan oo adkaanshaha ah (si wayn ayay u kici karaan oo si tartiib tartiib ah ugu soo degayaan);
curyaanka qaybta ka mid ah xubnaha gudaha, dhibaatooyinka lugaha, baalasha, dabada iyo qoorta;
jabinta dareemayaasha dareenka iyo dareenka bararka bararka lumbosacral;
dhaawaca indhaha ee indhaha, indho la'aan;
raashin xumo ama diidmo buuxda oo cunto ah;
isbeddelka midabada iris iyo qaabka ardayga (iris wuxuu noqonayaa midab-buluug ama midab-caddaan, ardaygu wuxuu qaataa qaab isugeyn ah, qaab-jajab ama qaab-qaabaysan);
hoos u dhaca soo-saarka ukunta ama maqnaanshaha dhamaystiran;
xanuunka jirka iyo xanuunka caloosha.
Xilligan la joogo ma jiraan daroogo oo si buuxda u daaweyn doona shimbiraha cudurka Marek. Haddii faafin faafin ah, daaweynta antiviral waxaa loo isticmaalaa, karantiilka ayaa la dhisaa, inta badan shimbirta ayaa lagu gowracaa hilibka si looga hortago faafidda cudurada u dhaxeeya dadka kale ee caafimaad qaba.
Waa muhiim! Habka ugu fiican ee looga hortagi karo fayraska waa tallaal ka hortag ah oo digaaga, kaas oo badiba shakhsiyaadka ka badbaadiya caabuqa ama fududeeya habka cudurka iyo badbaadinta nolosha.
Tixgeli tallaabooyinka la qaadayo haddii ay dhacdo infakshanka digaagga iyo shimbiraha.
In digaagga qaangaarka
Waxaa suurtogal ah in lagu daaweeyo dadka qaba cudurka qabaa kaliya marxaladda hore, marka shimbirta aan weli la qaadin curyaan. Wakiil fayruska ka hortag ah waa daawada "Acyclovir", laakiin ma dammaanad qaadayso boqolkiiba 100 natiijada, xitaa marka loo isticmaalo shuruudaha ugu horeeya ee lesionka.
Milkiilayaasha digaaga ayaa xiiseynaya inay wax akhriyaan sababta ay digaagga u baxaan oo ay cagahooda ku dhacaan, iyo sidoo kale waxa ay yihiin cudurrada ugu badan ee indhaha iyo cagaha ee digaagga.
Daroogada mararka qaarkood ma saameyn waxtar leh mana badbaadinayso shimbirta inay ka dhacdo qalalaaso, taasoo keenaysa geerida hore ee qofka. Daawada waxaa loo isticmaalaa hal kiniin oo 200 mg ah maalin kasta 2 maalmood, ka dibna yareeya qiyaasta iyo isticmaal 0.5 kiniin ah 5 maalmood.
Si aad u jilciso saameynta daroogada iyo ilaalinta mareenka mindhicirka ee xaalad caadi ah, malawad kasta waxaa la siiyaa Bifidumbacterin hal dhalo hal mar maalintii, isticmaalka daroogada wuxuu soconayaa 5 maalmood kadib daaweynta Acyclovir. Dhammaadka kooraska daaweynta, xajmigu wuxuu daboolayaa faafinta finanka cuncunka, wuxuu keenaa midab cirro leh, taas oo ah calaamad wanaagsan oo muujinaysa bilowga habka bogsashada ee shimbirta.
Daaweynta hilibka digaaga digaagga inta badan ma bixinayaan natiijo waxtar leh, sidaa daraadeed, marka ay sii kordhayaan aroosyada qiyaasta warshadaha, tallaalka ka hortagga waxaa loo isticmaalaa, kaas oo lagu fuliyo maalinta labaad ee nolosha jiirka. Mararka qaarkood chicks waxaa la tallaalaa 10-20 maalmood kaddib tallaalka ugu horreeya.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiso u leedahay akhrinta sida digaagga broiler u eeg, waxa la siin karaa digaagga, sida loo koriyo loona ilaaliyo digaagga broiler, sida iyo sida loo daaweeyo cudurrada faafa iyo kuwa aan lakab lahayn ee digaagga, iyo sidoo kale waxa ay ka kooban yihiin iyo digaagga broiler.
Haddii aan tallaalka la qaadin oo cudurku ku faafo, daboolista 5 ilaa 10% ee shakhsiyaadka, markaa wax micno ah maahan in la bilaabo daaweynta, xaaladdan dhammaan digaagga ay la xiriiraan bukaanku waa in la gowraco. Ka dib markii la ilaaliyo shakhsiyaadka cudurka qabaa, guriga si fiican ayaa loo nadiifiyaa si looga fogaado faddaraynta qaybta cusub ee kaydka da'da yar ee la dhigayo.
Ma taqaanaa? Talaalkii ugu horreeyay ee ganacsiga ee cudurka Marekka ayaa la abuuray 1970-yadii waxaana lagu guuleystay in loo isticmaalo cudurro fayrus ah.
Wixii tallaal ah ee shimbiraha isticmaala fayrasyada laqaaday oo nool. Qalabka ka dib, unugyada difaaca ee cudurka waxaa lagu soo saaraa jirka shimbiraha, taas oo intaa sii sii ogolaaneysa inaad si firfircoon ula dagaalanto infekshanka marka uu dib u galo jirka.
Video: Tallaalka digaagga ee cudurka Marek Si loo tallaalo shimbiraha, tallaalka fayruska ayaa loo isticmaalaa, taas oo ku saleysan digaagga digaaga, maalgelintaas waxaa ka mid ah:
tallaalka fayraska oo ka yimaada cadaadiska M 22/72;
Tallaalka fayraska dareere "Nobilis";
Joojinta la hakiyey ee foomka tallaalada "Vaksitek", "Mareks", "Rispens".
Ka dib marka la soo saaro tallaalka, jirka waxaa lagu ilaaliyaa 90%, difaaca jirka ee digaagga waxaa la sameeyaa 10 maalmood tallaalka ka dib. Dareen-celinta yar-yar ee tallaalka ee tallaalka xaalad hurdo iyo lakarig ayaa loo oggol yahay.
Ka dib marka la soo saaro tallaalka laba maalmood, digaagga waxaa lagula talinayaa in lagu meeleeyo meel diirran si looga fogaado suurtogalnimada dhacdooyinka hargabka sababtoo ah difaaca jirka oo daciif ah.
Hababka ka hortaga
Si looga fogaado horumarka infekshinka guriga, waa inaad u hoggaansanaataa xeerarka asaasiga ah ee ka hortagga, kuwaas oo ah:
u hoggaansamida shuruudaha caafimaadka xoolaha iyo nadaafada jirka ee qolka shimbiruhu ku nool yihiin, iyo wacyigelinta;
qabashada jeermi-farsameynta nadiifinta iyo qashinka ka hor inta aanad bilaabin shaqsiyaadka cusub;
Baro sida iyo sida loo isticmaalo si habboon u neefso coop digaaga.
jajabinta iyo burburinta shakhsiyaadka leh calaamadaha ugu weyn ee cudurka iyo lagu tuhunsan yahay inay qaadaan cudurka;
ilaalinta shimbiraha da'da, i.e. xoolaha yaryar waa in si gooni ah looga kiciyaa digaagga, iyo chicks waa in la siiyaa ugu yaraan 30 maalmood ee ugu horreeya nolosha;
ilaalinta xaaladaha karantiilka ugu yaraan hal bil oo shimbiro cusub ah;
beerashada shimbiraha leh calaamadaha cudur kasta qolka karantiinka.
Haddii shaqsiyaadka leh calaamadaha cudurka Marekka la ogaado, tallaabooyin ka hortag ah ayaa laga qaadaa:
mamnuucida iibinta ukunta laga soo gooyay iyo iibinta digaaga nool;
joojinta hanti-saaridda dhalinyarada ilaa inta cudurku si buuxda u cirib-tirayo;
naqshadda loo isticmaalo taranka ayaa si buuxda loo kala saari karaa;
guryaha digaaga waa la nadiifiyaa loona nadiifiyaa.
Waa muhiim! Sida antiseptic ee daaweynta qolka, xalalka formaldehyde, chlorine, phenol, iyo alkal amaan ah ayaa loo isticmaalaa.
Sidaa darteed, cudurka Marek wuxuu halis u yahay digaagga, sidaas darteed tallaalka prophylactic waxaa badanaa loo isticmaalaa beeraha digaaga iyo beeraha, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ka fogaato khasaaro weyn. Si loo yareeyo khatarta caabuqa shakhsiyaadka, waxay la tacaalayaan tallaabooyin ka hortag ah, sida haddii dhammaan heerarka nadaafadda la arko, shimbiraha ayaa u nugul yaraanta cudurka.